Islamic nyanzvi inoti Bitcoin ndiye ateerere pasi Sharia mutemo - Blockchain News
Kubvumbi 12, 2018 arun
Islamic nyanzvi inoti Bitcoin ndiye ateerere pasi Sharia mutemo
A Kuzivisa nemunhu nyanzvi Islamic ichangopfuura kuti Bitcoin ndiye aiteerera pamwe Sharia mutemo chingava chikonzero shure yanhasi $1000 mutengo pakaitika, kuvhura kumusika makambani Muslim vakanga kare chokwadi kana cryptocurrency vanonyatsokwanisa sezvo mari pasi Sharia mutemo.
Bitcoin Falls pasi dzimwe tsanangudzo mari mu Sharia mutemo - chinhu inofambidzana kugamuchirwa chaizvo sezvo mari noruzhinji kana hurumende murayiro.
Mufti Muhammad Abu Bakar, mumwe Sharia chipangamazano uye abvume mukuru pana Blossom Finance muJakarta, rakabudiswa pepa mutongo kuti mune zvimwe zviitiko, zvirokwazvo Bitcoin anogona kuva Halal (akabvumira).
An Excerpt verenga:
"MuGermany, Bitcoin kunozivikanwa kuva mari zviri pamutemo uye saka anokodzera sezvo mari Islamic muGermany. Munyika dzakadai US, Bitcoin haana yepamutemo nomutemo mari chinzvimbo asi unogamuchirwa aripe pane zvakasiyana siyana vatengesi, uye saka anokodzera sezvo mari Islamic zvakajairika. "
Uyezve, Bitcoin uye blockchain rwokugadzira swatanudza zvakanaka Sharia dzidziso. Fractional kuchengeterwa rwezvemabhengi apo zvarinoroora mari kwaisanganisira ndiwo mugumisiro ane “unethical chikwereti” (mhindu) chinorambidzwa. Nekuti blockchain pasina mubvunzo kunoratidza uridzi, zviri chaizvoizvo zvikuru aiteerera pamwe Sharia pane rwezvemabhengi, uye izvi zvose zvinosanganisirwa mupepa rakabudiswa Mufti Muhammad Abu Bakar.
Ndiani akaita chikuru mupiro kuna crypto indasitiri? pamusoro 7
Previous Post:Baidu anotangazve blockchain-inobva Stock papuratifomu
Next Post:Indian crypto Exchange Coinsecure hacked
Iran pamutemo dzairambidzwa basa redu kushandiswa cryptocurrencies
chikuru bhangi Dubai raMwari anotangazve blockchain Check chirongwa
Crypto zvokutengeserana App Robinhood anotangazve mu Colorado
Vanoita vakasangana SEC kukurukura crypto vakabvumirwa
Bitcoin kutenga Zvinorayirwa vanopfuura 90% mumusika kokutanga kubva March 2017
250 Makambani kubatana ICICI kubhengi kuti blockchain papuratifomu
Kubvumbi 3, 2018 arun
Portfolio Diversification uye Unbalancing
Kana investor kwazvo akasarudza kwavo nechido vanopedzisira
Cryptotrading – Entry uye Exit Points
Kana zviri nani kutenga cryptocurrency? Zvino-kutengesa? izvi
Kurume 11, 2018 arun
Zvakakanganiswa Crypto makambani. mhosho 5
Batanidzwa kumucheto zvokutengeserana Marginal zvokutengeserana ndechimwe chezvinhu purofiti,
Too mangwanani kutengesa crypto yesangano Mumwe mangwanani vanoita mu
bitcoin ne misa cheni BTC gore kuchera Coinbase crypto cryptocurrencies cryptocurrency ethereum Exchange hardfork ico litecoin Ma mucheri kuchera kwete samambure itsva nhau dandara dzakati ripple vakatevera teregiramu chiratidzo zviratidzo wokutengesera chikwama